Mamadika iPad ho boaty misy Light Light HD | Vaovao IPhone
Mamadika iPad ho boaty jiro misy Light Pad HD
Ity misy vahaolana amin'ny olana taloha. Ahoana ny fomba hijerena sary mihetsika, mangarahara na taratra X tsy misy boaty maivana? Eny, miaraka amin'ny rindrambaiko Light Pad HD dia efa manana ny vahaolana amin'ity olana ity izahay. Ity fampiharana ity dia ahafahantsika mijery slide, negatives, mangarahara nefa tsy mila boaty maivana.
Tiako ny maka sary foana ary miaiky izany aho Manana boaty maivana aho, miaraka amin'ny masom-pamokarany. Volana vitsivitsy lasa izay dia tsy maintsy nikarakara karazana negatives sy slide ho fankalazana aho ary voatery nihazona ilay boaty jiro taloha. Mandreraka, mandreraka ary mandany fotoana ny fizotrany.
fa miaraka amin'ny Light Pad HD ity dingana ity dia tena mora ary haingana. Azontsika atao ny manamboatra ny rindranasa hametrahana ny haben'ny sarimihetsika, na hamorona habe ampahana. Amin'ny maody 35mm, misy toerana ho an'ny sary mihetsika enina, ary ny takelaka tsirairay dia azo alefa na hovonoina, tsy ampiasainao izany mba hisorohana ny fijerin'ny maso antsika. Slide efatra dia mety tafiditra amin'ny iPad Mini fa tsy enina izay hitantsika amin'ny iPad 9,7-inch.
Para nametraka haben'ny varavarankely tsy maintsy miforitra eo amin'ny efijery isika amin'ny rantsantanana roa hanamboarana ny habeny. Tsotra toy izany. Ny rindrambaiko koa dia manana fifehezana hazavana mba tsy hanelingelina ny fahitantsika ny hazavana manodidina raha tena mamiratra izy.
Ny rindrambaiko iPad Light dia hevitra marani-tsaina misy azy, ary fomba iray hafa hampiasana ny iPad-nay izany. Ho an'ireo matihanina, izay efa an-taonany maro, dia ilaina ny manampy azy ireo manasokajy ny ratsy izay notehiriziny isaky ny joro. Manana namana maromaro aho mpaka sary matihanina ary efa naneho hevitra tamiko izy ireo fa hitany fa fampiharana tsara hanampiana azy ireo izany. Ankehitriny dia mila mahita ora malalaka hipetrahana sy manomboka mandamina fotsiny izy ireo.
Fanazavana fanampiny - Safidy App Store: Fampidirana ny Photography
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Mamadika iPad ho boaty jiro misy Light Pad HD
Apple dia nahazo fitaovana hanamboarana efijery 100 ka hatramin'ny 200 tapitrisa eo ho eo ho an'ny iPhone
Bibikely ao amin'ny iOS 7 dia ahafahantsika manafoana ny 'Find my iPhone' nefa tsy mametraka teny miafina (Video)